दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अभिव्यक्ति प्रति सत्तारुढ दलको आपत्ति » खबरहरुको एउटै केन्द्र
दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अभिव्यक्ति प्रति सत्तारुढ दलको आपत्ति
सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ १२:२६ मा प्रकाशित !
काठमाडौं। सत्तारुढ नेकपा एमालेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नागरिक अभिनन्दनमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दिएको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएको छ।
एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुरमा भएको अभिनन्दनमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले मुख्यमन्त्री राउतसँग सो अभिव्यक्ति तत्काल सच्याउन गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए।
जनकपुरमा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले ‘संविधानविरुद्ध संघर्ष’ गरिरहनु परेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। सो अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा समेत उलंघन हुनेगरी आएको भन्दै उपाध्यक्ष रावलले तत्काल सच्याउन माग गरे। छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री आएका बेला मुलुकलाई कमजोर बनाउने खालको अभिव्यक्त आएकोमा भन्दै उनको आपत्ति छ।
उपाध्यक्ष रावलले मोदी भ्रमणका बेला सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका सांसद कीर्ति आजादले दिएको अभिव्यक्ति पनि निन्दनीय भएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले सो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन चेतावनी दिए। मोदी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला भारतीय सांसद आजादले ‘जनकपुर भारतमा फर्काउनु पर्छ’ भनेर ट्वीट गरेका थिए। आजादको सो टिप्पणी नेपालको स्वाभिमान विरुद्ध भएको भन्दै उपाध्यक्ष रावलले आपत्ति जनाएका हुन्।
उनले नेपालको अस्मितामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी आएको आजादको सो भनाई कुनै पनि नेपालीलाई सैह्य नहुने चेतावनी दिए। यसअघि दुई नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री राउतको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीलेपनि असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए। उनले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई मोदीको नेपाल भ्रमणका बारेमा जानकारी गराने क्रममा राउतको अभिव्यक्ति प्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
PREVIOUS POST Previous post: बार्सिलोनाको सबैभन्दा खराव दिन, रोकियो कीर्तिमान
NEXT POST Next post: डोल्पामा विप्लबका कार्यकर्ता द्वारा प्रहरी माथि आक्रमण
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ १२:२६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ १२:२६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ १२:२६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ १२:२६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ १२:२६